Dhaxal-sugaha Imaaraadka Carabta Oo Waajahaya Kiis Maxkamadeed Oo Caalami Ah | Hangool News
Dhaxal-sugaha Imaaraadka Carabta Oo Waajahaya Kiis Maxkamadeed Oo Caalami Ah
Hangoolnews:- Warbaahinta Faransiiska ayaa xaqiijsay in cabasho laga diiwaan geliyay dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta, iyadoo lagu eedeeyay jidh-dil iyo dad lagu waayay dagaalka ka socda dalka Yemen.
Eedaha ka dhanka ah Maxamed bin Zayed waxaa sameeyay Xulifadda Caalamiga ah ee Difaaca Xuquuqda iyo Xoriyadda iyo lix qof oo u dhashay dalka Yemen, kuwaas oo muujiyay in jidh-dil iyo xadgudub loogu geystay xabsi Imaaraadku maamulo oo ku yaalla Yemen.
Isagoo adeegsanaya awooddiisa millatari, Bin Zayed waxaa lagu eedeeyay in uu “ku lug lahaa jidh-dil” ka dhacay Yemen. Maxkamadaha Faransiiska ee la shaqeeya garsoorka caalamiga ah ayaa leh awood ay dacwad ugu soo oogi karaan, isla markaana ku xukumi karaan dambiileyaasha, haddii ay joogaan dalka Faransiiska.
Le Monde oo ah wargeys galab walba kasoo baxa Faransiiska ayaa xaqiijiyey in cabashadda la marsiiyay nidaamka dacwada madaniga ah ay keeni karta baaris garsoor. Si kastaba, su’aasha xasaanadda diblomaasiyadeed ee dhaxal sugaha Abu Dhabi ayaa weli laga doodayaa waxaana go’aan ka gaadhi doona garsooraha baadhitaanka sameynaya.
“Macaamiisheydu wey ku qanacsanyihiin billowgaan waxayna rajo weyn ka qabaan cadaaladda faransiiska,” ayuu yidhi Joseph Barham oo ah qareenka dadka dacwadda gudbiyay. “ Waxay si gaar ah u diideen ficiladda jirdilka ee ciidanka Imaaraadka Carabtu ay ku geysteen meel dadka lagu xidho”
Wargeyska Faransiiska ayaa wariyay in mid ka mid ah dhibaneyaasha uu sharaxay in la xidhay isagoo ka shaqaynaya sii deynta dad ay xireen ciidanka Imaaraadka Carabta. Waxaa uu sheegay in lagu riday meel god ah oo lagu hayay muddo 48 saacadood ah, iyo in lugahiisa iyo gacmihiisana fiilo la iskula xidhay ka hor “inta aan dharka laga siibin”. Waxaa uu sidoo kale xusay in koronto lagu dhejiyay islamarkaana sigaar lagu gubay.
Sida qareenku sheegay, kiiska waxaa lagu dhisay heshiiska Qaramadda Midoobay ee ka dhanka ah jidh-dilka. Dacwadda ka dhanka ah Bin Zayed waxay ku saleysantahay warbixin ay diyaareen qubaro ka tirsan Qaramadda Midoobay, taasi oo cadeysay in weeradda ay Yemen ka geysanayaan xulifadda uu Sucuudigu hogaaminayo ay isu bedeli karaan dambiyo dagaal, islamarkaana uu jidh-dil ka dhaco laba xarumood oo ay maamulaan ciidanka Imaaraadka.
Urur fadhisiigu yahay Geneva oo lagu magacaabo SAM una dooda xuquuqda iyo xoriyadda ayaa soo dhaweeyay baadhista Faransiisku ku bilaabay Dhaxal Sugaha Imaaraadka. “Go’aanka billowga baadhista waxaa uu farriin cad u dirayaa dhammaan dhinacyadda ku lugta la heh xadgudubyadda xuquuqda aadanaha ee Yemen,” ayaa lagu yidhi war saxaafadeed uu ururku soo saaray. “Waxaan ku dhiiri gelineynaa dhamaan dhibaneyaasha in ay cabsida ka baxaan oo ay soo gudbiyaan kiiskaan oo kale” ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka.